यौनका बारेमा जसलाई जे बोले पनि छुट ! - TodayKhabar
यौनका बारेमा जसलाई जे बोले पनि छुट !
बागलुङ : अधिकांश मेला महोत्सवमा अश्लील शब्द बोल्यो कि प्रहरीले खोरमा लैजान्छ। अश्लील र अभद्र व्यवहार रोक्न आयोजक र प्रशासनले ठूलै संख्यामा प्रहरी र स्वयंसेवक खटाउँछन्। तर, बागलुङको पश्चिम निसीखोला गाउँपालिका–६, भल्कोटमा बर्सेनि एउटा अनौठो मेला लाग्छ। त्यो मेलामा यौनका बारेमा जसलाई जे बोल्न मन लाग्यो, त्यही बोल्ने छुट हुन्छ।
माघ ३ का दिन पुतलीलाई डोलामा बोकिन्छ र कापैसँग डुलाइन्छ। भल्कोट गाउँभन्दा केहीमाथि रहेको एउटा बारीमा पुगी पुतली घुमाइन्छ र पुतलीजस्तै बनेका मान्छेहरू हातमा तरबार, लट्ठी लिएर नाच्छन्। साँझपख डोलामा बोकेको पुतलीलाई नदी किनारमा विसर्जन गरिन्छ। पुतली विसर्जनपछि स्थानीयवासीले आफन्तलाई घरमा लगी तरुल, रोटीलगायत मीठा परिकार खुवाउँछन्। लामो समय खडेरी परेको समयमा पनि पुतली नचाएपछि पानी पर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
यो नाचसँग जोडिएको अर्को रोचक पाटो हो, भालुको पित्त देखाउने। पुतली नाच र कापैसँगै सांकेतिक रूपमा गाउँलेले भालुको पित्त देखाउने गर्छन्। यो देख्दा जोकोहीलाई आश्चर्य लाग्छ। एक जना मानिसलाई घुम (भेडाको ऊनबाट बनाइएको कपडा)ले बेरिन्छ। उसलाई खरानी लगाएर नचिन्ने बनाइएको हुन्छ, जसलाई भालु भनिन्छ। ती व्यक्तिलाई धेरै रक्सी खुवाएर लट्ठ बनाई पशुझैं दाम्लोले बाँधेर लतारिन्छ।
केही बेरमा मान्छेको भीडमा लगेर भालु आयो भन्दै उसको गुप्तांग सबैमाझ देखाइदिने र खरानी, माटो हाल्दिने गरिन्छ। यसरी भालुको पित्त देखाउँदा पितृ खुसी हुने र देवी हाँस्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिल शिरीषले लेखेका छन् ।